မိုင်လို – ကျောက်ကျော – Thet Nandar
မိုင်လို – ကျောက်ကျော
Posted on February 5, 2012 July 3, 2014 by Thet Nandar
ကျောက်စိမ်း – ကျောက်ကျော တလွှာ …
အုန်းနို့ တလွှာ …
cutter လေး နဲ့ ဖြတ်ထားသော ကျောက်ကျောတုံးလေးများ
အုန်းနို့တလွှာ နှင့် မိုင်လို တလွှာ
မိုင်လို ကျောက်ကျော ဗန်းပေါ်ကို ကျောက်စိမ်း- ကျောက်ကျောတလွှာ ထပ်တင်ထားသော ကျောက်ကျောဗန်း
ကျောက်ကျော ၃ လွှာ
အုန်းနို့ ( ၂ ) ဗူးလောက် ထည့်ရင် တော်တော်ကို စားကောင်းနေပါပီ။
ကိုယ့်တို့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုရင် … သကြား … အုန်းနို့ က ဂရုစိုက်ပေးမှ .. .တော်ကာကြတာပါ။
တကယ်တန်းက … ကိုယ် အုန်းနို့၊ ထောပတ်၊ ငပိ စားလို့ရတယ်။
ဆီ ပဲ … စားအုန်းဆီဆို မတည့်ဘူး။
စာအုန်းဆီကို ဆီ အဟောင်းထဲ .. ဆီ အသစ် ထပ် ထပ် ထည့်ပီး ကြော်တဲ့ ဆီကြော်မုန့်ဆို … စားပီးတာနဲ့ အကြောပိတ်တော့တာပါပဲ။
၀က်ဆီ နဲ့ ကြော်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုလည်း အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ။
လူ က .. သွေးတိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ သွေးပေါင်ကျတာ။
ပုံမှန်က အပေါ်သွေး 120 … အောက်သွေး 80 မှာ ….
ကိုယ့်က အပေါ်သွေး 100 … အောက်သွေး 60 … လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီထက် ကျရင် လူက မခံနိုင်တော့ဘူး။
ကမ်ဘာကြီး ချာချာလည် သွားတော့တာပါပဲ …
ဆရာဝန်က မသန့်တဲ့ ဆီ နှင့် အိပ်ရေး လုံးဝ …. လုံးဝ ကို မပျက်ခိုင်းတာပါ။
မိုင်လို၊ အုန်းနို့ဗူး၊ သကြား၊ အစိမ်းရောင်ဆိုးဆေး၊ ကျောက်ကျောထုပ်
ရန်ကုန်မှာတုန်းက သင်္ကြန်နားနီးပီးဆိုရင် စီးတီးမတ်မှာ တယ်လီဖုန်း ကျောက်ကျောမှုန့် တထုပ်ဝယ်၊
စီးတီးမတ်က ထုပ်တဲ့ အ၀ါရောင်သကြားထုပ် – ငါးဆယ်သား တစ်ထုပ်ဝယ်
အုန်းနို့ – ၂ ဗူး ၀ယ်ပါတယ်။
ရေကို တစ်လီတာ ပဲ ထည့်တာပါ။
ကျောက်ကျောချက်ဖူးတဲ့လူတွေ ဒီအချိုးအစားဆို မျက်စိမှာ ပုံဖော်လို့ ရမှာပါ။
အုန်းနို့တထပ်၊ ကျောက်ကျော တထပ်နဲ့ အုန်းနို့ အီအီ စိမ့်စိမ့် ကျောက်ကျော အရသာလေး …
ကျောက်ကျော နှင့် အုန်းနို့ အလွှာ အချိုးအစား ညီညီလေး …
အဲဒီ အချိုးအစားနဲ့ဆိုရင် ကျောက်ကျောက အုန်းနို့ပြစ်ပြစ်၊ ကျောက်ကျော ပြစ်ပြစ်လေး စားလို့ကောင်းတယ်။ သကြား အချိုက အတော်ပါပဲ။
ကွတ်ကီးမုန့်တွေမှာ ထည့်တဲ့ ဆိုးဆေး
ကလေးများ အကြိုက် မိုင်လို နှင့် လူကြီးများအတွက် အုန်းနို့ တဗူးပဲ ထည့်သုံးထားပါတယ်။
အခု ချက်တာ ရေများတယ်။
အုန်းနို့နည်းတယ်။ ( လူကြီးတွေ … ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ ) 😛
ကျောက်ကျောတုံးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်။
အိမ်မှာ ချက်တဲ့ အချိုးအစား ကျဲ ကျဲ က ….
အုန်းနို့ တဗူးကို ထည့်ကျို …
ရေ … ကို ကော်ဖီသောက်တဲ့ မတ်ခွက် ( ၃ ) ခွက်ကို အပူပေး …
သကြား … ဆန်ချိန်ခွက် ( ၃ ) ခွက် ကို အရည်ပျော်အောင် မွှေပေးပီး …
မိုင်လို …. လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ( ၇ ) ဇွန်း မောက်မောက် ( ကိုယ့် နံပါတ်7ကို ကြိုက်လို့ )
ကျောက်ကျောအမှုန့် ( ၃ ပုံ ၂ ပုံ ) ထည့် … ပျော်နေအောင် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။
အဖတ်လုံးဝ မကျန်အောင် ညက်နေအောင် မွှေပေးပီးမှ ကျောက်ကျော်ဗန်းထဲ ထည့်။
ရေခဲသေတာ အောက်ထပ်ထဲ တနာရီကျော်လောက် အအေးခံလိုက်ရင်ပဲ ကျောက်ကျောက လှီးလို့ ရနေပါပီ။
အုန်းနို့နည်းလို့ အပေါ်လွှာ အုန်းနို့လေးတွေ ပါးပါးလေး ဖြစ်နေတာ။
( ကျန်းမာရေး … ကျန်းမာရေး )
ကျောက်ကျောမွှေတာ ညက်နေလို့ ကျောက်ကျောတုံးလေးတွေ ချောချောလေး ဖြစ်နေတာ ….
ကလေးများ အကြိုက် …. တုန် .. တုန် … ကျောက်ကျော အစိမ်းရောင် အတွက် …
ရေ ကို ကော်ဖီမတ်ခွက် နဲ့ ( ၂ ) ခွက် အပူပေး
သကြား – ဆန်ချိန်ခွက် ( ၂ ) ခွက်ထည့်
ကျောက်ကျောမှုန့် ၃ ပုံ ၁ ပုံ ထည့်
အစိမ်းရောင် ဆိုဆေး – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၄ ပုံ ၁ ပုံ ထည့်ပီး အဆက်မပြတ် မွှေပေးပီးမှ
ခဲနေပီးသော မိုင်လိုကျောက်ကျောဗန်းပေါ် ထပ်တင်လိုက်ရင် ကျောက်ကျော အစိမ်းရောင် နောက်ထပ် တလွှာ ကို ရရှိပါပီ။
6 thoughts on “မိုင်လို – ကျောက်ကျော”
ယိုးဒယားက လာတဲ့ တယ်လီဖုန်း ပုံ နဲ့ ကျောက်ကျောထုပ် ပါ ….
Previousရစ်ဌက်သား – ခရမ်းချဉ်သီးချက်
Nextပုစွန်၊ ငါးခြောက် ဆီပြန်ဟင်း